एसईईका उत्तरपुस्तिकामा प्राप्ताङ्क जोड्न गल्ती – दाङ खबर
काठमाडौँ, असार २५ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का उत्तरपुस्तिका परीक्षकले परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क जोड्न गल्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।
अध्ययनले सबैभन्दा बढी गल्ती गर्ने व्यक्तिका रूपमा परीक्षकलाई ठहर्याएको छ । नतिजाप्रति चित्त नबुझाई पुनर्याेगका लागि आवेदन दिएका कतिपय परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क परिवर्तन हुने गरेको छ । प्राप्ताङ्क परिवर्तन भएकाका एक हजार २०४ वटा उत्तरपुस्तिकामाथि गरिएको अध्ययनले परीक्षकको गल्ती ६३ प्रतिशत रहेको औँल्याएको छ ।
लामो समयसम्म परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सेवा गर्नुभएका पूर्वपरीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले परीक्षक र सम्परीक्षकले गल्ती गर्ने गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “धेरै परीक्षकले प्राप्ताङ्क चढाउँदा नै गल्ती गर्छन् । कतिपयले उत्तर जाँच्न छाडिदिन्छन् । टेबुलेसनको अङ्क जोड्न छुटाउँछन् । उनीहरूको लापरबाहीले यस्तो हुँदै आएको छ । ”
२०७५ सालको एसईई परीक्षाको नतिजाप्रति चित्त नबुझाएर आवेदन दिनेहरूको लाम पनिकामा बाक्लै देख्न पाइन्छ । यस पटक चार जनाले आठवटै विषयमा पुनर्याेगका लागि आवेदन दिएका छन् । पनिकामा मङ्गलबारसम्म करिब छ हजारले आवेदन दिएको जानकारी दिइएको छ । गत वर्ष नौ हजारले आवेदन दिएकोमा ८२७ जनाको प्राप्ताङ्क परिवर्तन भएको थियो । पनिकाको अध्ययनले सबैभन्दा बढी गल्ती गर्ने परीक्षकपछि डिकोडर र सम्परीक्षक रहेको देखाएको छ ।
पनिकाका कर्मचारीको गल्ती पनि देखिएको छ । विद्यार्थीका कारण पनि गल्ती हुने गरेको पाइएको छ । सोही अध्ययनले परीक्षकले अङ्क चढाउँदा सबैभन्दा बढी गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षकले गर्ने गरेको गल्तीको ६७ प्रतिशत अङ्क चढाउँदा गल्ती हुने गरेको छ । झण्डै २९ प्रतिशत गल्ती परीक्षकले प्राप्ताङ्क जोड्दा हुने गरेको छ ।
परीक्षकले गरेको गल्तीलाई सच्याउन सम्परीक्षकको व्यवस्था हुने गरेको छ तर सम्परीक्षकले पनि निकै लापरबाही गर्ने गरेको पाइएको छ । सोही अध्ययनले सम्परीक्षकले अङ्क नै नबुझिने गरी लेख्दा, परीक्षण छुटाउँदा र अङ्क यताउता लेखेका कारण प्राप्ताङ्क परिवर्तन भएको प्रस्ट गरेको छ । “परीक्षक र सम्परीक्षकले बाहिरी पानामा लेखेको कुल प्राप्ताङ्क पढ्न नसकिने उल्लेख्य मात्रामा रहेको पाइन्छ”, पनिकाको अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
पनिकाको अध्ययनबाहेक व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक डा. अमुदा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत वर्ष गठित कार्यदलले पनि नमुनाका रूपमा केही उत्तरपुस्तिका अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनका क्रममा पनि परीक्षकको गल्ती बढी फेला पारिएको थियो । डा. श्रेष्ठले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा गल्ती हुनुलाई मानवीय कमजोरीको संज्ञा दिँदै भन्नुभयो, “विद्यार्थीले पनि गल्ती गर्ने गरेको पायौँ । उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा बढी सजग र संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ । ”
पनिकाले अध्ययनपछि परीक्षक तथा सम्परीक्षकलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा अनिवार्य रूपमा भित्रको अङ्क दोहो¥याएर जोड्न लगाएपछि मात्र प्राप्ताङ्क महलमा लेख्न लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले सबैले गम्भीर रूपमा जिम्मेवारी पूरा नगरिँदिदा गल्ती हुने गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “समान्य त्रुटि गर्नेलाई कारबाही गरिएको अवस्था छैन । ठूलो गल्ती गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने भन्ने छ तर त्यस्तो अवस्था आइसकेको छैन । सामान्य गल्तीलाई मानवीय त्रुटिका रूपमा लिने चलन छ । ” समाचार प्रकृति अधिकारीले आजकाे गाेरखापत्रमा लेखेका छन् ।
Prevचिर्पटले हानेर ठूलोबुबा र ससुराको हत्या
कार्यविधिमै अल्झियो प्रदेश ५ को राजधानी सिफारिस समिति : प्रदेशको राजधानी दाङ कि बुटवल
तलब नपाएपछि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित, बिरामी मारमा